Shirka arrimaha Soomaaliya ee Roma oo maanta lasoo gabagabeynayo Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shirka arrimaha Soomaaliya ee Roma oo maanta lasoo gabagabeynayo Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Roma ee dalka Talyaaniga lagu soo gabagabeyo Shirkii kooxda xiriirka Caalamiga ah ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Waraysi uu siiyay Idaacadda Kulmiye Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga Nuur Xasan Xuseen Nuur Cade ayaa waxa uu faah faahin kaga bixiyay Shirka ay soo qaban qaabisay kooxda xiriirka Caalamiga ee ka soconaya magaalada Roma kaasi oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Nuur Cade ayaa waxa uu sheegay in Shirkaasi ay ka qeyb galayaan Masuuliyiin ay ka mid yihiin Raiisul wasaaraha, Gudoomiyaha barlamanka iyo Wakiilka QM ee Soomaaliya Mahiga kuwaasi oo Shirka qudbado ka jeediyay.
Safiirka ayaa waxa uu sheegay in Shirka looga hadlayo arrimaha Roadmap-ka oo ay ugu weyn tahay ka gudbida dowladda KMG ah si loo helo dowlad rasmi ah oo ka hana qaada dalka, isaga oo sheegay in qudbado ay jeediyeen ka qeyb galayaasha ay ku sheegeen in ay muhiim tahay in gacan weyn laga gaysto sidii ay arrintaasi ku hergali laheyd.
Shirka oo shalay furmay ayaa waxaa lagu wadaa in maanta lagu soo gabagabeeyo magaalada Roma islamarkaana laga soo saaro Warmurtiyeed ku saabsan waxii laga wada hadlay iyo heshiiska la gaaray.